PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: May 2012
ကချင်ဒေသအနှံ့တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ထိုးစစ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆင်နွဲကာ တပ်အင်အား ဖြည့်တင်းခြင်း၊ လက်နက် ခဲယမ်းဖြည့်တင်းခြင်း၊ တပ်ဖွဲ့ အလဲအလှယ် ပြုလုပ်ခြင်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင် နေကြသည်။ ရှေ့တန်းတပ်စခန်းမှ တပ်အလဲအလှယ်ပြု၍ မိမိ၏ တပ်ရင်းဌာနချုပ်သို့ ဆင်းသွားသော တပ်ဖွဲ့များကို နေ့ခင်းပိုင်းတွင် မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် ထင်သာမြင်သာ သယ်ဆောင် သွားကာ တပ်ယုတ် သယောင်ပြုနေကြသည်။ ၎င်းတပ်ရင်းပြန်တို့၏ ရှေ့တန်းနေရာသို့ အစားထိုး ပို့ဆောင်သော တပ်ဖွဲ့များကို ညအချိန်နှင့် မြို့များမှဖြတ်သွားရန် လိုအပ်ပါက လမ်းမီးပိတ်၍ အမှောင်ထုအတွင်း သွားလာ နေကြကြောင်း သိရသည်။
ရှေ့တန်းရောက် ရဲဘော်များ၏ ကံအကျိုးပေးမှု မတူညီကြချေ။ အချို့မှာ သေနတ် ထမ်းစရာမလိုဘဲ အရာရှိများ၏ ကျေးကျွန် သဖွယ် လိုက်ပါကြရသည်။ အချို့တပ်မိသားစု၏ ဘ၀မှာ ငွေကြေးစည်းစိမ် ပြည့်စုံသွားကြသကဲ့သို့ အချို့မှာ မိသားစု ဘ၀ ပျက်စီး သွားကြလေပြီ။
အချို့တပ်ဖွဲ့များ ရှေ့တန်းတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ် ကာလအတွင်း သစ်မှောင်ခိုသမားများထံမှ ငွေကြေး မြောက်များစွာ လက်ခံ ရရှိသူများလည်း ရှိသည်။ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြား ရာထူး၊ အဆင့်အလိုက် ၎င်းငွေကြေးများကို ခွဲဝေယူကြရာ အချို့တပ်သားများ ဝေစုကို မကျေနပ်မှုများ ပေါ်ပေါက်၍ ပြဿနာများ
တအာင်းအမျိုးသားတပ်မတော်(TNLA) နှင့် အစိုးရတပ် တိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်
၂၀၁၂ခုနှစ်၊ မေလ၂၉-ရက်နေ့ မနက်ပိုင်း၈-နာရီ ၄၅ နာမိနစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ မန်တုံမြို့နယ် ပန်ဆွေရွာနှင့် ထာတ်ကျဲတ်ရွာ အကြားတွင် တအာင်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA)နှင့် နမ့်လင်း အခြေစိုက် မြန်မာအစိုးရ တပ်တို့မိနစ်(၂၀)ကြာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
တိုက်ပွဲတွင် အစိုးရတပ်စခန်းမှ တပ်သား ၃ဦးကျဆုံးပြီး TNLAဘက်တွင် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိမှု မရှိကြာင်းလည်း သိရသည်။ အစိုးရတပ်နှင့်အတူ ထွန်းမြတ်လေးဦးအောင်သည့် နမ့်ဆန်ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့လည်း ပါဝင်ကြောင်း TNLAမှ တားဟိူဝ်ပ္လါင် ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
တအာင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်မှ တပ်ရင်း-၁၁၂ မှတပ်ခွဲ(၁) ဒုဗိုလ်မှူးလွယ်ဆိုင် တာဝန်ယူ ဦးဆောင်ပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သူက ဆက်ပြောပြခဲ့သည်။
Copy from - www.palaungland.org
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အကြီးဆုံးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းမ မန္တလေး-မူဆယ် ကားလမ်းမကို ဇွန်(၁)ရက်မှ စပြီး ညပိုင်းတွင် သွားလာခြင်းပိတ်ပင်သည့် ကြိုတင်အသိပေးစာကို KIO မှ ဖြန့်ဝေထားကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်သည် အရပ်ဝတ် ၀တ်ဆင်ကာ၊ အရပ်သားများ၏ ကားကိုအသုံးပြု၍၊ ညပိုင်းတွင် စစ်တပ် သွားလာ လှုပ်ရှားမှုများ ပိုတိုး လာသဖြင်၊့ လားရှိုးနှင့် မူဆယ် ကြားတွင် ပိတ်ပင် ထားခြင်းဖြစ်သည် ဟု တပ်မဟာ (၄) KIA အရာရှိ တစ်ဦးပြောသည်။
ဤ ပိတ်ပင်ခြင်းသည် ညပိုင်တွင်သာဖြစ်ပြီး၊ နေ့ခင်းပိုင်းတွင်မူ ပုံမှန် သွားလာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ဝေစာများကို လမ်းများတွင် ကပ်ထားခြင်း၊ ဖြန့်ကြဲထားခြင်းဖြင့် ဖြန့်ဝေကြောင်း ၎င်းအရာရှိက ပြောသည်။
ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး KIA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ဂွမ်မော်က ဗပိာုကော်မတီမှ အမိန့်ထုတ်ထားခြင်းမရှိ ကြောင်းနှင့် ရှေ့တန်းမှ လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့် သတိပေး တားမြစ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဒီဗီဘီသတင်းဌာနှ ၂၈ ရက်နေ့ ရေဒီယို သတင်းတွင် ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
လူပင်လယ်ကြီးကြားမှာ တွေ့ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းဆောင်နဲ့ လူထုရဲ့ မြင်ကွင်းပါ...
ယနေ့ ထိုင်းသတင်း ဋ္ဌာနတွေက တအံ့တသြ ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ မဟာချိုင်ရောက် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မဟာချိုင်မှ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ပြည်သူများရဲ့ မြင်ကွင်းပါ...။
လူပင်လယ်ကြီးကြားမှာ တွေ့ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းဆောင်နဲ့ လူထုရဲ့ မြင်ကွင်းပါ...။ တဝကြီးကြည့်ကြပါ.. (ထိုင်းလိုတလုံးမှ နားမလည်ပေမယ့် ကြည့်ရင်း ပီတိမျက်ရည်ဝဲရပါတယ်..)
ထိုင်းလုံခြုံရေးရဲ ၄၀၀ကျော် ချထားခဲ့ပါတယ်...။ မြန်မာပြည်သူတွေကတော့ မြင်ရတဲ့ အတိုင်းကြိကြိတ်တိုး ဝက်ဝက်ကွဲပေါ့...။ ပြည်ပရုပ်သံ သတင်းတွေမှာ အဆိုပါသတင်းဟာ ယနေ့ အထူးထုတ်လွှင့်ရတဲ့ သတင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာပြည်မှ ပြည်တွင်း သတင်းတွေမှာတော့ ဗလာနတ္ထိပါ..။ ထိုင်းသတင်းရုပ်သံတွေက တအံ့တသြ ထုတ်လွှင့်နေရတဲ့ ယနေ့ မဟာချိုင်မှ လူထုခေါင်းဆောင်နဲ့ ရွှေမြန်မာများ (ရုပ်သံ)
Copy from - demowaiyan.
ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင်မြို့ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့သောမိန့်ခွန်း
မေ(၃၀)ဒီပဲယင်း နိူင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုကြီး (၉)နှစ်ပြည့် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား(တိုကျို)။
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျို မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် မေ(၃၀)ဒီပဲယင်း နိူင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုကြီး (၉)နှစ်ပြည့် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား သတင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ ။
ဘန်ကောက်လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရုပ်သံသတင်း
video by - DVBBurmese
တရုတ်စီးပွားရေးသမား သံမဏီ စက်ရုံ အလုပ်သမားတွေ အားဖိနှိပ်ရက်မှု
အလုပ်သမား အခွင့်အရေး အချိန် (၈) နာရီစာလုပ် ၁၃၅ ကျပ်ပဲ ရပါတဲ့ လုံးဝမခံမရနိုင်ဖြစ် တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။ တနိုင်ငံလုံး အလုပ်သမားတွေ ကိုယ်စားပြု တိုက်ပွဲ ၀င်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တတ်နိုင်တဲ့ဖက်မှ
သံမဏီ စက်ရုံပိုင်းရှင် ကွန်မြုနစ် တရုတ်စီးပွားရေးသမား တယောက်ဖြစ်ပြီး အလုပ်သမားများ ကို လူမဆန်းစွာ ပြုလုပ် နေပါတယ် ။
အလုပ်သမား ခေါင်းဆောင်းတဦး ဖြစ်တဲ့ ကိုနော်အောင် (ကချင်းလူမျိုး)ပါ ရိုးသား ဖြုစင်ပါတယ် ။ကျန်အလုပ်သမားတွေနဲ့အတူ ပါဝင် အလုပ်သမား အရေးတော်ပုံ ကြီး ဆင်နွဲ နေပါတယ် ။
မိမိ တတ်နိုင်သမျှ နိုင်ငံသားတို့ အား မတရား မိနှိပ်တဲ့ တရုတ်ပိုင်ဆိုင်သော သံမဏိစက်ရုံ ။ ပြတ်သားစွာ ၀ိုင်းဝန်ဆန့် ကျင်ကျပါစို့ ။ သတင်း မျှဝေးပေးကျပါ ။
အဖိနှိပ်ခံ အလုပ်သမား လုပ်သားပြည်သူအတူရှိနေမယ်
အေသင် ၈၈မျိူးဆက် facebook မှကူးယူခဲ့ပါသည်။
Photo by - Reuters
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် TG-306 လေယာဉ်ဖြင့် Business Class တွင် လိုက်ပါကြောင်း သိရှိရသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အတူ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန္ဒာမင်း ၊ ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဒေါက်တာ ဒေါ်ငယ်ငယ် ၊ ကိုစိုးဝင်း (လုံခြုံရေးအရာရှိ) တို့ လိုက်ပါသွားကြောင်း .....
ဦးခွန်သာမြင့် မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့သို့ ကြိုတင်ရောက်ရှိကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်အဖွဲ့ ကို လာရောက် ကြိုဆိုမည် ဖြစ်ကြောင်း ....
သတင်းရင်းမြစ် - အဂ္ဂမဟာ ဒီမိုဖက်တီး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်အဖွဲ့သည် အခြား WEF ဧည့်သည်တော်များ တည်းခိုရာ BKK Shangrila Hotel မှာ
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂၄ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာ ခရီးစဉ်အဖြစ် ယနေ့ညနေ ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ် အချိန်တွင် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် TG-306 လေယာဉ်ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့သို့ ထွက်ခွာရန် ရှိပြီး ၎င်းနှင့်အတူ NLD ပါတီဝင် အချို့လိုက်ပါရန် ရှိကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ လေယာဉ် လက်မှတ် အရောင်း ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ
သတင်းရင်းမြစ် - The Voice Weekly
အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဦးဇော်မင်းနှင့် သမ္မတအကြံပေး ဦးကိုကိုလှိုင်တို့ ဖြေရှင်းပါရန်..
ယခုမြင်ကွင်းဟာ ယခုလဆန်းပိုင်းက မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံပါ.
လျှပ်စစ်မီးထိန်ထိန်လင်းနေတဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံတခုမှ မြင်ကွင်းမဟုတ်ပါ...။ တရုတ်CNICO ကုမ္ပဏီရဲ့ တကောင်းတောင် နီကယ်စီမံကိန်းမှ စက်ရုံနဲ့ ကွန်ဗေယာလိုင်း မြင်ကွင်းပါ...။ ရွှေလီ(၁) စီမံကိန်းမှ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားတွေ ပေးပို့ရာမှာ မြန်မာ၊ တရုတ်ယူနန်နဲ့ တကောင်းတောင် စီမံကိန်း ပါဝင်ပါတယ်..။
ဒီစက်ရုံအတွက် ဓာတ်အားတွေ မည်၍ မည်မျှ အသုံးပြု နေပါလဲ..။ ဒီလိုတောကြီး မျက်မည်းထဲမှာ မီးတွေ ထိန်ထိန်ညီးအောင် ထွန်းညှိထားတာ မည်သည့် အတွက်ကြောင့်ပါလဲ၊ ညဘက် လုပ်ငန်းခွင်လို့ ဖြေမယ် ဆိုရင်တော့ မီးချွေတာတဲ့ အနေနဲ့ နေ့ဘက်မှာ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်လို့ မရပေဘူးလား။ ညဘက်မှ လုပ်ငန်းခွင် လုပ်ပါတယ် ဆိုရင်လည်း ရိုးသားမှု ရှိပါရဲ့လား၊ လုံခြုံရေး အကြောင်းပြချက်လို့ ပြောရအောင်လည်း ပစ်မှတ်ကို မီးထွန်းပေးထား လေသလား၊ အဆိုပါ စီမံကိန်းမှာ တရုတ် ဝန်ထမ်းတွေ ၆၀ ကျော်ရှိပါတယ်...။ ဖယောင်းတိုင် ထွန်းပြီး နေထိုင်နေတာ မဟုတ်ပဲ အခန်းတိုင်းမှာ လေအေးစက်နဲ့ လျှပ်စစ် မီး ထိန်ထိန်လင်း လျှက်ပါ..။
ဒီစီမံကိန်းထဲက ရရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို ပြည်သူတွေ ရရှိခံစားဖို့ ဘေးဖယ်ထား၊ သိရှိခွင့် ရှိပါလေလား..။ ဖြုန်းနေတာလား သုံးနေတာလားဆိုတာ ခွဲခြားသိနိုင်ဖို့ ဒီမြင်ကွင်း မှတ်တမ်းတွေကို
စကိုင်းတိုင်း အထက်ပိုင်းမှာ ဒုတိယမောင်းကုန်း (တရုတ်ရွာတည်ဖို့) လုပ်ဖို့
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က အင်တာနက်တွေထဲမှာ ထီးချိုင့်မြို့နယ် မောင်းကုန်းကျေးရွာမှာ ပြည်ပက တယုတ်တွေ ကြီးစိုး လာမှုအကြောင်းလေး ဖတ်မိ လိုက်ပါတယ်၊ ဒီဆောင်းပါးလေး ဖတ်ရတဲ့(အမျိုးချစ်တဲ့သူတိုင်း)တက် တခေါက်ခေါက်နဲ့ ခံပြင်းကြတယ်၊ မကျေမနပ် ဖြစ်ကြရပါတယ်။
အဲဒီ တရုတ်တွေ ဘယ်လို ရောက်လာတာပါလဲ၊ ကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘဲဥ အစရှာမရသလို ပါပဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ရောက်လာတာလဲ မသိ၊ ဒါနဲ့ ဒေသခံတွေကို စုံစမ်းကြည့်တော့ တရုတ်တွေ မရောက်လာခင်မှာ မန္တလေးက လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦး ထီးချိုင့်မြို့နယ် မောင်းကုန်းရွာမှာ သကြားစက်စတည်တယ်၊ အဲဒီလုပ်ငန်းရှင်က စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတိုင်းမှူး (ယခု စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်) ကို သူကအတော် ပိုင်ပါတယ်။
ပိုင်အောင်ကလည်း ရက်ရက်စက်စက် ပေးကမ်းထားတာကိုဗျ၊ သူ့ရဲ့ကုမ္မဏီမှာလည်း စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ရဲ့သားကို ငွေထည့်စရာ မလိုပဲ ရှယ်ယာ ၀င် လုပ်ပေး ထားလိုက်တယ်၊ နောက် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် သမီးကိုလည်း မန္တလေး ရတနာပုံဈေး အနားမှာရှိတဲ့ ၃ထပ် တိုက်တစ်လုံး အလကား ပေးထားလိုက်သေးတယ်။
တိုက်နံပါတ်(C3)ပါ၊ ကပ်လျှက်(C2)ကတော့ အဲဒီအချိန် မန္တလေးမြို့တော်ဝန်လုပ်နေတဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ် ရန်သိမ်းကို ပေးထားတာပါ၊ သူ အလကားပေးတဲ့ တိုက်တစ်လုံးရဲ့ တန်ဘိုးဟာ သိန်း ၃,၀၀၀ လောက် တန်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှ ထိုးစစ်ဆင်မှုအား ရှုတ်ချကန့်ကွက်ပွဲနှင့် UNFC ၏ ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်အား ထောက်ခံသည့် AUN-Japan နှင့် KNO-Japan ၏ သဘောထား ကြေညာချက်။
Support Unfc Statement
အစိုးရသတင်းစာ စွတ်စွဲချက်အား ကေအိုင်အေ ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ် ချုပ်ဂွမ်မော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းချ​က် ...
ကေအိုင်အေ ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ် ချုပ်ဂွမ်မော် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချ​က် အရပ်ဖက် ပစ်မှတ်တွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့ အောက်ခြေတပ်တွေကို ညွန်ကြားထားတာ မရှိဘူးလို... Copy from - dvbradio
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှ ထိုးစစ်ဆင်မှုအား ရှုတ်ချကန့်ကွက်ပွဲနှင့် UNFC ၏ ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်အား ထောက်ခံသည့် အခမ်းအနား
၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ (၂၈)ရက်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ စစ်တပ်မှ ထိုးစစ်ဆင်မှုအား ရှုတ်ချကန့်ကွက်သည့် ဆန္ဒပြ အခမ်းအနားနှင့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖယ်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ (၁၀)ရက် နေ့စွဲပါ ထိုးစစ်ဆင်နေမှုကို ရပ်စဲခြင်းမပြပါက မိမိတို့ UNFC အဖွဲ့ဝင်များအနေနှင့်လည်း ပဏာမ သဘောတူညီထားသော အပြစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြန်လည် သုံးသပ်မည့် ကြေညာချက်အား ထောက်ခံသည့် အခမ်းအနားကို ဂျပန်ရောက် တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများတို့မှ စုပေါင်း၍ ယနေ့ ညနေ ၃း၀၀ နာရီမှ ၄း၀၀ နာရီအထိ တိုကျို မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ကြပသည်။
တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းအပေါ် မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ် စစ်ဆင်နေမှုအား ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ကြောင်း၊ အပြစ်မဲ့ ကချင်လူထုအပေါ် စစ်ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်မှု ၊ ကချင်အမျိုသမီးများအား အဓမ္မပြုကျင့်မှုနှင် လူအခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေ ချက်ခြင်း ရပ်တန့်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်းရေးနှင့် တန်းတူရေး ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး အတွက် တိုက်ပွဲဝင် ကချင်တိုင်းရင်းသားများအား ၀ိုင်းရံ ထောက်ခံ အားပေးရန်ကြဖို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ကြပါသည်။
မေလ ၉ ရက် နေ့မှစတင်၍ အလုပ်သမားများဘက်မှ တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင်လည်း လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ Hi Mo ဆံပင်တုစက်ရုံ၊ ပုလဲ၊ စပယ်ပွင့်၊ နေမင်းအောင်၊ YJ အထည်ချုပ် စက်ရုံများနှင့် တိုးမြတ်အောင် ဇာထိုးပန်းထိုးစက်ရုံ၊ Ocean shoes ဖိနပ်စက်ရုံများမှ အလုပ်သမားများလုပ်ငန်းခွင် ပြင်ပမှ တောင်းဆိုလျက်ရှိနေကြောင်းနှင့် အဆိုပါစက်ရုံများမှ တောင်းဆိုနေသည့် စုစုပေါင်း အလုပ်သမားအရေအတွက်မှာ ဦးရေ ၆၀၀၀ ၀န်းကျင်ခန့်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
မေလ(၂၂)ရက်နေ့တွင် စတင်တောင်းဆိုခဲ့သော တိုးမြတ်အောင် ဇာထိုး ပန်းထိုးစက်ရုံ၌ မေလ(၂၃)ရက် နေ့၊ မနက်(၆)နာရီ ၀န်းကျင်တွင် အ လုပ်သမများအား စက်ရုံတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးမှ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူး လွန်ခဲ့မှုကြောင့် ကျူးလွန်ခံရသူ အ လုပ်သမ(၃)ဦးမှ လှိုင်သာယာရဲစ ခန်းတွင် အမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မေလ ၉ ရက် နေ့မှစတင်၍
ပြည်သူတွေကိုတော့ လျှပ်စစ်ခြွေတာသုံးဖို့ ညွှန်ကြားနေတဲ့ သမ္မတရဲ့ အကြံပေးဆိုသူ ဦးကိုကိုလှိုင် စကားကို စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြောဆိုပါ..
တောကြီးမျက်မည်းထဲက လျှပ်စစ်မီးကို ဖြန်းနေတဲ့ နီကယ်စီမံကိန်း
သမ္မတရဲ့ အကြံပေးဆိုသူ ဦးကိုကိုလှိုင် ဒီပုံကို ကြည့်ပြီးမှ.. စကားကို စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြောဆိုပါ..။ (ဒုတိယ ဦးဇော်မင်း ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ မဆင်မခြင် ဆက်ပြောပါ)
ဒီမိုဝေယံ ဘလော့ဂ်မှာ မကြာမှီ ဖော်ပြပေးပါမယ်..။ လောလောဆယ် ဖေ့စ်ဘွတ် ပရိသတ်နဲ့ အများသိအောင် တင်ပေး လိုက်ပါတယ်..။ တရုတ်နဲ့ ဖက်စပ် တကောင်းတောင် နီကယ်စီမံကိန်းရဲ့ တောကြီးမျက်မည်းထဲက ညဘက်မြင်ကွင်းပါ။ နေ့ဘက် မြင်ကွင်းတွေ ကိုတော့ ယခင်တင်ထားတာ ပြန်ယှဉ်ကြည့်နိုင် ပါတယ်..။ http://www.demowaiyan.org/2012/03/blog-post_3829.htmlSee more
ဒီဓာတ်ပုံကတော့ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း မြင်တွေ့ရတဲ့ တရုတ်နဲ့ ဖက်စပ်တူးဖော် ထုတ်လုပ်နေ...တဲ့ ဒေါ်လာ သန်း ၈၀၀တန် နီကယ် သတ္တုထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းရဲ့ ညဘက်မြင်ကွင်းပါ..။
ပြည်သူတွေကိုတော့ လျှပ်စစ်ခြွေတာသုံးဖို့ ညွှန်ကြားနေတယ်။ သပိတ်ကျင်းခရိုင် တောကြီး မျက်မည်းထဲက စီမံကိန်း ကွန်ဗေယာလိုင်း ကိုတော့ ထိန်ညီးနေအောင် လျှပ်စစ်မီးတွေ ထွန်းထားတယ်...။
သမ္မတရဲ့ အကြံပေးဆိုသူ ဦးကိုကိုလှိုင်ခင်ဗျား ..... ဒီမိုဝေယံမှ မတ်လက တင်ပြထားတဲ့ အဆိုပါ စီမံကိန်းကို www.demowaiyan.org/2012/03/blog-post_3829.html မှာ ပြန်ဖတ်နိုင်ပါ။
မြန်မာ အစိုးရစစ်တပ်မှKIA ဘက်သို့ လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်နေ
(၂၃.၅.၂၀၁၂)ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီမှ ည(၉)နာရီ အတွင်း KIA, တပ်မဟာ(၅)ဒေသ၊ တပ်ရင်း(၃)နယ်မြေ နန်ဇော်ရန် အနီး အင်လုံခ ဘက်သို့ ရောက်ရှိလာသော မြန်မာ စစ်တပ်(ခ.မ.ရ-၃၀၁) စစ်ကြောင်းသည် KIA တပ်ရင်း(၃)၏ နန်းဇော်ရန် Post အား လက်နက်ကြီးဖြင့် စတင်ပစ်ခတ်ရာမှ တိုက်ပွဲ အပြင်းအထန် ဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရရှိ။
(၂၃.၅.၂၀၁၂)ရက်နေ့ ည(၇း၃၀) အချိန်၊ KIA တပ်မဟာ(၅)ဒေသ၊ ဂန်ဒေါင်ယန် မြန်မာ စစ်တပ်မှ အင်ပွန်း ဖဂါ တောင်ဘက်သို့ (၁၀၅မမ)လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်နေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
KIA, တပ်မဟာ(၅)“ဒွမ်ဘမ်ဘွမ်” ဒေသတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်
ကချင်ပြည် ကေအိုင်အို အစိုးရ တပ်မဟာ (၅) နယ်မြေဖြစ်သော ဒွမ်ဘမ်တောင် သို့ ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်မှ မေလ (၂၃) ရက်နေ့တွင် မြင်းအကောင်း (၃၀) ကျော်ဖြင့် စာနပ်ရိက္ခာများ သွားရောက် ပို့ဆောင်သော ဗမာစစ်တပ်ကို ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များမှ မနက် (၈း၀၀) နာရီတွင် တစ်ကြိမ်၊ (၁၀း၀၀) နာရီခန့်တွင် တစ်ကြိမ် (၂) ကြိမ် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
source - jinghpawkasa
၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ ၂၂ ရက်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ်၊ ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲ၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ်။Photo courtesy of NLD
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ လာမဲ့ ရက်သတ္တပတ်အတွင်း ကျင်းပမဲ့ ၂၀၁၂ အရှေ့အာရှဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ညီလာခံကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက် မိန့်ခွန်း ပြောမယ်လို့ သိရပါတယ်။
၂၀၁၂ အရှေ့အာရှဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ညီလာခံကို မေလ ၃၀ ရက်ကနေ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီညီလာခံကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်မိန့် ခွန်းပြောမယ်လို့NLD ပါတီက အတည်ပြု ပြောဆိုပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည် အနေနဲ့ အခု သွားရောက်မဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ ၂၄ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ပထမဦးဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ပြည်ပခရီး ဖြစ်ပါတယ် ။
အဲဒီ ဘန်ကောက်မြို့က ညီလာခံကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်လည်း တက်ရောက် မိန့်ခွန်းပြောမယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်း ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့ မှာ ဗြိတိန်ပါလီမန် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက် မိန့်ခွန်း ပြောမယ်လို့ မနေ့က ကျင်းပတဲ့ ဗြိတိန် အောက်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ Mr.John Bercow က ထုတ်ဖော်ပြောပါတယ် ။
ဆေးဆိုင်များတွင် အလွယ်တကူ ဆေးဝယ်ခွင့် ရရှိခြင်းကြောင့် အသက် ၂ဝ အောက် အမျိုးသမီးများ ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှု ပိုမိုများပြားလာကြောင်း သားဖွားနှင့် မီးယပ်ဆရာဝန် ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ကြူက ပြောသည်။ ”ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် ဆေးတွေသောက်ပြီး သွေးဆင်း လွန်လို့ ဆေးရုံရောက်တာတွေ ပို များလာတာတွေ့ရတယ်။
လူ ငယ်မိန်းကလေးနဲ့ ချစ်သူတွေ လွန်ကျူးမိပြီး ကိုယ်ဝန်ရလာတဲ့ အခါကျမှ ကြောက်လန့်ပြီး ကြား ဖူးနားဝနဲ့ ဆေးဆိုင်တွေမှာ အ လွယ်တကူ ဝယ်လို့ရတဲ့ သွေးပုပ် ချဆေးတွေ၊ေ ဆးပြင်းတွေသောက် ပြီး ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချတာတွေဟာ အသက် ဆုံးရှုံးတဲ့ အထိဖြစ်နိုင်တယ်” ဟု အထက်ပါဆရာဝန်က ပြောသည်။
ယင်းသို့သော အချိန်မျိုးတွင် ဝမ်းဗိုက်ထဲရှိ ကလေးအသက် အန္တရာယ် ရှိ၊မရှိ အာရ်ထရာဆောင်း ရိုက်ကာ ကလေး အခြေအနေမကောင်း ပါက သားအိမ်ခြစ်ပစ်ရပြီး ကလေး ဖျက်ချပြီးမှ ပိုးတစ်ခုခုသားအိမ်၊ သား ဥပြွန်၊ မွေးဖွားရာလမ်းေ ကြာင်းတို့သို့ ဝင်ရောက်သွားပါက သားအိမ်ပြွန် လမ်းကြောင်း ပိတ်သွားကာ နောင်
လျှပ်စစ်မီး ရရှိစေရန် ရန်ကုန်မြို့ခံများ ဒုတိယနေ့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်
ဆူးလေ ဘုရားဆီသို့စီတန်းလှည့်လည်လာကြသော လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးဆန္ဒဖော်ထုတ်သူ များ။
လျှပ်စစ်မီး အပြည့်အ၀ ရရှိစေရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့နေလူထုသည် ဒုတိယ မြောက်နေ့အဖြစ် ယခုလ ၂၃ ရက်ည ၇ နာရီမှ စတင်ကာ ၈ နာရီခွဲခန့် အထိ ဆူးလေဘုရားလမ်းပေါ်တွင် စီတန်းလှည့်လှည် ဆန္ဒ ဖော်ထုတ် ခဲ့ကြသည်။ ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်သည့်လူထုမှာ ပထမနေ့ကထက် များပြားခဲ့ပြီး ဆူးလေ ဂုံးကျော်တံတားကို ကျော်ဖြတ်ကာ ဆူးလေ ဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ်သို့ တက်ရောက်၍ သုံးပတ် ပူဇော်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ဆီမီးတိုင်များကိုဘုရားပေါ်တွင် ကပ်လှူခဲ့ ကြသည်။ ဆန္ဒဖော်ထုတ်သည့် လူထုအင်အားမှာ တစ်ထောင် ၀န်းကျင်ခန့်ရှိပြီး လာရောက် အားပေးသည့် လူထုများမှာလည်း ပိုမို များပြား လာခဲ့သည်။
Ko Thaw's photos
by: Ko Thaw
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့တဲ့ လျှပ်စစ်မီးအကြောင်း ကောက်နှုတ်ချက်(ရုပ်သံသတင်း)
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း အန်အယ်ဒီရုံးဖွင့်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့တဲ့ လျှပ်စစ်မီးအကြောင်း ကောက်နှုတ်ချက်
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနနှင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ နိုင်ငံတော် ငွေကြေးအလွဲသုံးမှု
ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနအောက်ရှိ လေကြောင်း ဆက်သွယ် လမ်းညွှန် ကွပ်ကဲ​ရေးဌာနခွဲသည် ပြည်တွင်း လေယာဉ်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ လေကြောင်း ပိုင်နက်​အတွင်း ဖြတ်ကျော် ပျံသန်းလျှက်ရှိသော လေယာဉ်များ ဘေးကင်း လုံခြုံစွာ ပျံသန်း သက်ဆင်းနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော ဆက်သွယ်ရေး စက်များ၊ လေကြောင်း လမ်းညွှန်စက်များနှင့် လေကြောင်းသုံး ရေဒါများအား အစဉ်ကောင်းမွန်မှု ရှိနေစေရေး တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရသော ဌာနခွဲဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ ၎င်းဌာနခွဲဟ၏ စက်ပစ္စည်းများ ပြုပြင် ထိန်းသိန်းခြင်း လုပ်ငန်း​အား ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သော PARTNER ASSOCIATES INTERNATIONAL ကုမ္ပဏီ၏ လက်ခွဲတစ်ခုဖြစ်သော TRACTION TECHNOLOGIES Pte. Ltd မှ တစ်နှစ်လျှင် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းစားရိတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁. ၅) သန်းဖြင့် ရယူ လုပ်ဆောင်လျှက် ရှိနေပါသည်။
သုိ့ရာတွင် အမှန်တကယ် တာဝန်ယူနေရသော လေကြောင်းဆက် သွယ်လမ်းညွှန် ကွပ်ကဲရေးဌာနခွဲရှိ​
Atrocities In Kachin Land အစိုးရ၏လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှ
ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သော ဗမာအစိုးရ တပ်မတော်၏ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ကချင် လူထုအပေါ် မတရားပြုကျင့်မှူ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက် မှူပေါင်းများစွာမှ ကမ္ဘာ့မီဒီယာများတွင် တင်ပြသော
တရုတ်ပြည် အရှေ့ ပိုင်းဒေသက မြို့ ကြီးပြကြီးတွေမှာ လျှပ်စ်ဓါတ်အား အမြဲတမ်း အလုံအလောက် ရရှိစေဖို့အတွက် အနောက်ပိုင်း ဒေသက လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပို့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ တရုတ်အစိုးရ ပေါ်လစီအတိုင်း ယူနန်မှာ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတွေ အကောင် အထည် ဖော်နေပါတယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပြီးသကာလ နိုင်ငံတကာက အံ့သြ ယူလောက်အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို အထိုက်အလျောက် တွေ့မြင် ခဲ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတွင်းရှိ ဝန်ကြီးဌာနများနဲ့ မူဝါဒများကို ပြုပြင်ဖို့၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကြိုးနီ စနစ်များ ပြုပြင်ဖို့ သမ္မတက တွန်းအားပေး လုပ်ခိုင်း နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးကို ဘယ်လိုဘဲလုပ်လုပ် တပ်မတော်ရဲ့အခြေခံ ပင်ရင်း စိတ်ဓါတ်က အဲ့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို အသာတကြည် စိတ်ရောကိုယ်ပါ လက်ခံမှ ဖြစ်တယ်လို့ စစ်တပ်တွင်း အရာရှိတချို့က ဆိုကြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း တပ်မတော် ကိုယ်တိုင် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ဖေါ်ဆောင်ရေးကို လေးလေးနက်နက် ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက် သွားမယ်ဆိုတဲ့ သံန္နိဌာန်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ချမှတ်ဖို့ လိုကြောင်း ပြောသွား ခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး စစ်တပ်မှ အရာရှိတစ်ဦးက NLD ကို အားမလို အားမရ အခုလို သူ့အမြင်ကို ထောက်ပြလာပါတယ်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တပ်မတော်သား အများစုက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီးလို့သာ သိကြပြီး ကျန်တဲ့ ဒေါ်စုရဲ့စိတ်နေ စိတ်ထားကိုတော့ သိပ်မသိကြဖူးဗျ။ ခက်တာက NLD အသိုင်းအဝိုင်း အထူးသဖြင့် အောက်ခြေတချို့က စစ်တပ်ကို အဆိုးမြင်ဝါဒနဲ့ သိမ်းကျုံး မြင်နေတုံးဘဲဗျ။ တကယ်တော့ တပ်မတော်သားတွေမှာ တရားတဲ့ အမိန့်၊ မတရားတဲ့ အမိန့်ဆိုပြီး ခွဲခြားလက်ခံလို့ရတဲ့ အခြေအနေ မရှိဘူး။ တပ်မတော်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ Commading officer တပ်ရင်းမှူးမှ တိုင်းမှူး အဆင့်လောက်ထိကို NLD က စည်းရုံး သိမ်းသွင်းဖို့ ကောင်းတယ်။
NLD အောက်ခြေ တချို့က တိုင်းပြည်နိမ့်ကျ ယိုယွင်းရောက်ခဲ့ရတာဟာ စစ်တပ်ကြောင့်လို့ သိမ်းကျုံး မြင်တာဟာ မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ အာဏာရှင် စနစ်နဲ့ အာဏာရှင်တွေကို ပစ်မှတ်ထား ခွဲခြားမြင်ပြီး တပ်မတော်သားတွေအပေါ် ပြည်သူ့ရဲ့ သားသမီးများအဖြစ် မြင်စေ ချင်တယ်ဗျာ။
နိယာမ သဘောအရ အဲဒီလို အဆိုးမြင်နေရင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲချင်တဲ့ တပ်မတော် အရာရှိတွေတောင် တုံ့ဆိုင်း သွားကြတယ်လို့” စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အားဝက်ဘ်ဆို​ဒ်ကို ပြောကြားလာကြောင်း တင်ပြ လိုက်ရပါတယ်။
သတင်းရင်းမြစ် - စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား
၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေးအတွက် ပြည်သူလူထုပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ခန့်က ဖယောင်းတိုင်များ ကိုင်စွဲလျက် ဆူးလေ ဘုရားပေါ်တက် ဆုတောင်းခဲ့ကြပြီး ဘုရား ရင်ပြင်တွင် လက်ဝဲရစ် တပတ်ရစ်ကာ တောင်းဆို​ ခဲ့ကြကြောင်း မြစ်မခ သတင်းထောက် ထွန်းနေအောင်၊ စောဇင်ညီနှင့် ကောင်းမြတ်ဖြိုးတို့မှ
Copy from - Shwe Myitmakha Media Group
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ ၁၁ ရက်နေ့ က NLD ပုဇွန်တောင်ြ​မို့နယ်ရုံးခန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌ မိန့်ခွန်းပြောနေစဉ်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လာမယ့် ဇွန်လ (၁၄) ရက်နေ့မှာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့က နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (ILO) ရုံးချုပ်မှာ မိန့်ခွန်းပြောကြားမယ်လို့ ILO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Juan Somavia က ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နှစ် (၂၀) ကျော်အတွင်း ပထမဆုံး ပြည်ပခရီးအဖြစ် ဇွန်လမှာ ဥရောပကို ထွက်ခွာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၃ ခုနှစ်က ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘဲလ်ဆုကို ကိုယ်တိုင် လက်ခံဖို့အတွက် နော်ဝေးနိုင်ငံကို အသွား ဂျီနီဗာမြို့က နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ILO ညီလာခံကို တက်ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ILO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က - အခုကျင်းပမယ့် ILO ညီလာခံဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ပြည်ပမှာ မိန့်ခွန်းပြောကြားတဲ့နေရာ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နော်ဝေးနိုင်ငံကနေ ဗြိတိန်နဲ့ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွေကို ဆက်လက် သွားရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးက ၂၄ နာရီ မီးရရှိရေး ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှတ် ၂ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ပြည်ထောင်စု ဒု-၀န်ကြီး ဦးအောင်သန်းဦးနဲ့ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြတ်အောင်တို့ မန္တလေးမြို့မှာ ရှင်းလင်းပွဲတခု တနင်္လာနေ့ ညနေပိုင်းမှာ ပြုလုပ် (ရုပ်သံ)
by - DVBBurmese
(၁) ဖယောင်တိုင်မီးများ ထွန်းညှိ ကိုင်ဆောင်ထားသော ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူ ၅၀ ခန့်သည့် ယနေ့ည ၇ နာရီခန့်က ရန်ကုန်မြို့လယ် ဆူးလေ မီးပွိုင့်အနီးရှိ လက်ရွေးစင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ရှေ့မှ ဆူးလေ ဘုရားလမ်းအတိုင်း စတင်ထွက်ခွာ လာခဲ့ပြီး ယခုအခါ မဟာဗန္ဓုလလမ်း အတိုင်း ၂၈ လမ်းဘက်သို့ သွားနေကြောင်း အဆိုပါနေရာသို့ ရောက်ရှိနေသော The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
(၂) ဖယောင်းတိုင် မီးထွန်း ဆန္ဒပြသူများမှာ မဟာဗန္ဓုလလမ်းအတိုင်း စီတန်း သွားလာနေရာမှ ၃၂ လမ်း အရောက်တွင် ပြန်လှည့်လာကြပြီး ယခုအခါ ဆူးလေဘုရားပေါ်သို့ တက်ရောက် သွားကြကြောင်း အဆိုပါနေရာသို့ ရောက်ရှိနေသော The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်ရရှိရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှု ရန်ကုန်မြို့မြင်ကွင်းများ
Photo By:D-Min (တိုက်ရိုက်ပေးပို့သည်)Yangon Media Group
ဂျပန်နိုင်ငံရောက် တိုင်းရင်းသား ညီအကိုများ အားလုံးကို အထူး ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရောက် တိုင်းရင်းသား ညီအကိုများ ခင်ဗျား..
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC က မေလ (၁ဝ) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည့် သဘောထားကြေငြာချက်အား ထောက်ခံပွဲနှင့် ကချင်ဒေသ အတွင်း လက်ရှိသမ္မတ ဦးသ်ိန်းစိန်အစိုးရ၏ မျိုးဖြုတ် ထိုးစစ်ဆင်နေမှုအား ချက်ခြင်းရပ်တန့်ပေးရန်နှင့် နိုင်ငံသား အချင်းချင်း ပြင်းထန်စွာ ထိုးစစ်ဆင် သတ်ဖြတ်နေခြင်းအပေါ် ရှုတ်ချ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြရန်အတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် ။ ( ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ ၂၈ ရက် ၊ တနင်္လာနေ့)
နေရာ ။ တိုကျို မြန်မာ သံရုံးရှေ့
အချိန် ။ ညနေ ၃း၀၀ နာရီ မှ ၄း၀၀ နာရီအထိ
၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ တောင်းဆိုနေကြသည့် မန္တလေး ၂၀ ရက်နေ့ ညနေပိုင်း(ရုပ်သံသတင်း)
You Tube video by - yamounnar
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်တွင် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြစ်ကြီးနားမြို့ဒေသခံ ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်နေစဉ်။NLD
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မေရီလန်းပြည်နယ်၊ Johns Hopkins တက္ကသိုလ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး ငြိမ်းချမ်းစွာ တိုက်ပွဲဝင်မှုအတွက် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ ချီးမြှင့် လိုက်ပါတယ်။
အခုလို ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ချီးမြှင့်ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Johns Hopkins တက္ကသိုလ်ရဲ့ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့ဘ၀တာရဲ့ အချိန်ကာလအများစုကို စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ အရင်လအတွင်းက ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူဦးဆောင်တဲ့ ပါတီဝင်တွေ အနိုင်ရရှိတာကို အစိုးရက အသိအမှတ်ပြုခဲ့ရကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
မန္တလေးမြို့တွင် လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်ရရှိရေး ဆန္ဒပြမှုကြောင့် ဦးဆောင်သူတချို့အပါအ၀င် ဆန္ဒပြသူ ၄၀ ဦးခန့်ကို ယနေ့နံနက်စောစော ပိုင်းတွင် အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရသည်။
အဖမ်းခံရသူများတွင် စာရေးဆရာ ညီပုလေး၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD)မှ ဒေါ်ခင်သန်းမြင့်၊ ဘကြီးအောင်၊ ကိုဝင်းဇော်ဦး၊ ကိုချစ်ရင်၊ ကိုမြင့်စိုး နှင့် မေတ္တာကမ်ပိန်းမှ ဒေါ်အမာနီ တို့ ပါဝင်ကြောင်း မန္တလေးမြို့ခံ သတင်းသမားတဦးက ပြောသည်။ ၎င်းတို့သည် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးအတွက်၂ ရက်ဆက်တိုက်ဆန္ဒပြကြခြင်း ဖြစ်သည်။
သတင်းရင်းမြစ် - ဧရာဝတီ သတင်းတို
အမှတ် (၈) ရဲတပ်ရင်း ရဲတပ်သား ၇ဝ လောက်က ရပ်ကွက် လူထုကို အင်အားသုံး ရိုက်နှက်မှုဖြစ်ပွား
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ပတ္တမြားမြို့သစ်မှာ အမှတ် (၈) ရဲတပ်ရင်း ရဲတပ်သား ၇ဝ လောက်က ရပ်ကွက် လူထုကို အင်အားသုံး ရိုက်နှက်မှုတခု မေလ ၁၆ ရက်နေ့ ညပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို RFA အဖွဲ့သား ကိုဂျေက တင်ပြထားပါတယ်။
မုံရွာမှာလဲ လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန် ရရှိရေး တောင်းဆိုမှုတွေ စတင်ပြီ....
မုံရွာမှာ မေလ ၂၁ ရက် ညနေ ရ နာရီလောက် ကစပြီး လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန် ရရှိရေးအတွက် ဖယောင်းတိုင် မီးထွန်းဆန္ဒပြ ရာမှာ လူ ၂ ထောင်ကျော်လောက် ပါဝင်ခဲ့ ကြတယ်